Izipu Iwu - Storelọ ahịa ASFO
Adreesị ị tinyere mgbe ị debanye aha na weebụsaịtị gosipụtara na akpaghị aka dị ka adreesị nnyefe maka izipu usoro gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka enyefe iwu gị na adreesị ọzọ, naanị ị ga - ahọrọ "Zipu gaa na adreesị dị iche iche" ma fanye ozi izipu ọhụrụ.
Y’oburu na odi gi nma, inwere ikehapu okwu banyere uzo esi ekwu okwu gi. Iji maa atụ, can nwere ike ịgwa anyị maka ịpụghị na 13th, ma ọ bụ bụrụ na onweghị onye nọ n'ụlọ n'oge nnyefe, anyị nwere ike ịhapụ ịtụ gị n'ahịa ụlọ ahịa na-esote ya.
Họrọ Diszọ Mbupu
Bulie ebe a na-ere ọgwụ: Họrọ nke a ma ọ bụrụ na ibi nso na Maia ma ọ bụ na ị na-eme njem ịga ya. Agaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ị ga - akwụsị n'ụlọ ahịa ọgwụ iji bulie usoro gị, ọ dịla mma ịga. Jiri ohere a wee jikwaa ọgwụ ị gụrụ, jụọ ndị ọrụ ọgwụ ọgwụ maka ndụmọdụ ma ọ bụ jiri ọrụ ndị anyị nwere maka gị rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị mfe ịchọta anyị.
Nweta Homelọ: Nhọrọ a ga - apụta ma ọ bụrụ na ịhọtara "Maia District" dịka ebe obibi ma ọ bụ bụrụ na ịgbakwunye Medicine na ụgbọ gị ma họrọ otu mpaghara Maia ma ọ bụ mpaghara Oporto dị ka ebe obibi.
Mbuga ozi CTT (Nzipu Eletriki): O buru na ibi n’ebe di anya ma karie inyefe ulo, can gha acho inye ihe CTT gha enye. Dabere na adres i hoputara maka nnyefe, ego nzipu ozi gi na oge nnabata ha di iche:
Pọtugalọn Pọtugalọn: nnyefe: ụbọchị 1 ruo ụbọchị atọ
Mpaghara nweere onwe ya, Azores na Madeira: ruo ụbọchị azụmaahịa ise
Ezumike nke Europe: nnyefe: ụbọchị atọ ruo ise
Ọnụahịa niile edepụtara gụnyere VAT na ọnụego ekwesiri n'ike.
Kaadị kredit ma ọ bụ Paypal
Mgbe ịhọrọ usoro nnyefe na ịkwụ ụgwọ, mpaghara "Order Summary" ga-apụta. Kwenye ozi ndị a:
- Ordertụ ozi nyefe ozi na ụzọ iziga ya.
- akwụkwọ ozi ọnụahịa na usoro ịkwụ ụgwọ.
- Nchịkọta nke ụdị na ọnụ ọgụgụ nke ihe enyere n'iwu, yana ndepụta zuru ezu nke subtotals.
- Ọnụahịa Mpempe akwụkwọ akwadoro na VAT, ụgwọ nzipu ozi, ụdị VAT na uru ikpeazụ.
- Ozi gbasara usoro ịkwụ ụgwọ yana ozi ndị ọzọ bara uru.
Ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi yana dịka mmasị gị si dị, ị nwere ike ịga n'ihu na ndenye ọpụpụ. Nke mbu, ikwesiri ịgụ ma kwenye na General Terms of Business wee pinye aka na "Ebe a choro".
Ọ bụrụ na ịnatala otu, tinye kuki ọ bụla.
Debe iwu gị ma were ihe niile anyị nwere maka gị!